MX Linux: ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂ နောက်ဆုံးလ၏နောက်ဆုံးသတင်းများ | Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | | GNU / Linux များ, NOTICIAS
အခြားအဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအကြားအားသာချက်ကိုယူပြီးပြီးသား၊ Distro MX Linux၎င်း၏ရက်အနည်းငယ်အကြာပစ်လွှတ်လိုပဲ 19.1 ဗားရှင်းနှင့်၎င်း၏မူကွဲ "AHS"ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီလလတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အခြားသူများကိုမှတ်ချက်ပြုပါမည်။
MX Linuxအဲဒီအကြောင်းမသိသေးသောသူတို့အဘို့,aဖြစ်ပါတယ် GNU / Linux Distro လက်ရှိလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအကြားသမဝါယမဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကနေဖွံ့ဖြိုးပြီး "antiX" နှင့်ယခင် MEPIS ဖြန့်ဝေသည်။ ရလဒ်တစ် ဦး ခေတ်သစ်၊ အလင်း၊ အစွမ်းထက်။ ဖော်ရွေသော distro.
ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာနောက်ဆုံးအကြိမ်ပြောခဲ့တာကငါတို့အကြောင်းပြောခဲ့တဲ့ လက်ရှိမူကွဲ (၁၉ - Ugly Duckling)ငါရှိစဉ်အခါကဖြစ်ခဲ့သည် beta ကိုအဆင့် တရားဝင်အဖြစ်ဖြန့်ချိခဲ့သည်အခါ တည်ငြိမ်သောဗားရှင်း။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစေရန်စိတ်ဝင်စားသူများသည်ယခင်ယခင်စာပေများကိုဖတ်ရှုကြရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သို့သော်၎င်းသည်မှတ်သားထိုက်သည် လက်ရှိမူကွဲ (၁၉ - Ugly Duckling) လာမည့်:
"MX Linux သည်လူအများကြားတွင်ထင်ရှားပေါ်လွင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုလူမှုအဖွဲ့အစည်းများသည်တီထွင်ရန်သူတို့၏အကောင်းဆုံးကိရိယာများနှင့်စွမ်းရည်များကိုပံ့ပိုးပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည် un GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း အလင်းပေမယ့်ကြံ့ခိုင်, တစ် ဦး ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့၏အယူအဆအောက်မှာဒီဇိုင်း ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်အစိုင်အခဲစွမ်းဆောင်ရည်တို့ပါ ၀ င်သောကြံ့ခိုင်။ အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုနိုင်သည့် desktop။ ဒါတွေအားလုံးကိုအလွယ်တကူဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်၊ အသုံးပြုရန်နှင့်ဖြန့်ကျက်ရန်အတွက် ISO ပုံသဏ္sizeာန်သေးငယ်သည်။". Previous Post: MX Linux ၁၉: DEBIAN 19 ကိုအခြေခံထားသောမူကွဲအသစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
0.1 နောက်ဆုံးသတင်း ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလ MX Linux အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်း - Ugly Duckling
0.2 VirtualBox သည်အဆင့် ၆.၁.၂ - ၅ / ဖေဖော်ဝါရီအထိအဆင့်မြှင့်တင်သည်
0.3 တရားဝင် repositories တွင်အပြောင်းအလဲများ - 10 / ဖေဖော်ဝါရီ
0.4 Fluxbox Integrated Configuration Update ကို - ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်
0.5 MX Linux 19.1 - 15 / Feb အသစ်ထွက်ရှိလာသည်
နောက်ဆုံးသတင်း ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလ MX Linux အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်း - Ugly Duckling
VirtualBox သည်အဆင့် ၆.၁.၂ - ၅ / ဖေဖော်ဝါရီအထိအဆင့်မြှင့်တင်သည်
ဤအသစ်ပြောင်းခြင်းကိုတရားဝင် Package Repository Manager ၏စကားလုံးများအားကိုးကားခြင်းအားဖြင့်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
"…လက်ရှိဗားရှင်း မှစ၍ အမှားပြင်ဆင်ချက်များနှင့်တိုးတက်မှုများစွာရှိခဲ့သည်။ လက်ရှိဗားရှင်းသည် ၄ ​​င်း၏ဗားရှင်းအသစ် ၅.၄+ kernels တွင်တည်ဆောက်မည်မဟုတ်ပါ၊".
အတူတူလုပ်ဆောင်သည့်အခါပုံမှန်အတိုင်းထောက်ခံခြင်းသို့မဟုတ်“ ကောင်းသောအလေ့အကျင့်” ပြုလုပ်ခြင်းသည် Virtualbox ၏ Virtual Machines (VM)“ သိမ်းဆည်းထားသော” သို့မဟုတ်“ ဆိုင်းငံ့မှု” သည် update ကိုအသုံးမပြုမီပိတ်ထားရမည်။ နောက်ဆုံးသတင်း
တရားဝင် repositories တွင်အပြောင်းအလဲများ - 10 / ဖေဖော်ဝါရီ
ဒီ update ကို:
"အကြောင်းပြချက်မှာ antiX နှင့် MX နှစ်ခုလုံးအတွက်တစ်ခုချင်းစီကိုမနင်းဘဲအထူးဗားရှင်းများကိုဖွံ့ဖြိုးရန်အများဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခွင့်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ antiX နှင့် MX အကြားဆက်နွယ်မှုမှာမည်သည့်နည်းနှင့်မျှမပြောင်းလဲပါ".
အထူးသ, အပြောင်းအလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုရည်ညွှန်းသည် Antix repositories ဖိုင်ထဲမှာ configured "/Etc/apt/sources.list.d/antix.list" သူတို့ကပုံမှန်အားဖြင့် (ဖယ်ရှား) ပိတ်ထားလိမ့်မည် လက်ရှိအရာများအားလုံးကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်း (သို့) ပေါင်းစည်းခြင်းကြောင့်မည်သည့်ကိစ္စရပ်တွင်မဆိုမည်သည့်အထုပ်၏ဖျက်သိမ်းမှုကိုမျှဖော်ပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ MX-Linux သိုလှောင်ရုံ (/etc/apt/sources.list.d/mx.list).
Fluxbox Integrated Configuration Update ကို - ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်
ပြောင်းလဲမှုသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုဒါခေါ် configuration ကိုမှဖန်ဆင်းတော်မူ၏ MX-Fluxbox 2.0 အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေ၊
Underlying System နှင့်အပြည့်အဝပေါင်းစည်းခြင်း၊ တစ်ချက်ကလစ် MX Tools ကဏ္ access ကို ဝင်ရောက်၍ Xfce4 ၏ပြည့်စုံသောမီနူးကိုရယူနိုင်စေသည်။
wmalauncher မှစွမ်းအားပေးထားသော Dock နှင့် launchers ကိုဖန်တီးခြင်း
GTK2အခင်းအကျင်း (lxappearance) အတွက်ပံ့ပိုးမှု။
update ကပြောကြားခဲ့သည်, MX-Fluxbox 2.0, ပြီးသားအတွက်ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်သည် ISO ကို de MX-19.1.
MX Linux 19.1 - 15 / Feb အသစ်ထွက်ရှိလာသည်
ဤ update ကိုရိုးရှင်းသောပုံမှန် update မှတဆင့် console များမှတဆင့် command များမှတဆင့်သို့မဟုတ် package များ update လုပ်ရန် graphical tool မှအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။ MX Linux.
"…ကျွန်ုပ်တို့၏ MX-19 ဗားရှင်းအသစ်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ bug ပြင်ဆင်ခြင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မူရင်း MX-19 ထုတ်လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း application အသစ်များပါဝင်သည်။ သင် MX-19 ကိုအသုံးပြုထားပြီးဖြစ်ပါကပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ Packages များအားလုံးပုံမှန် update channel မှတဆင့်ရရှိနိုင်ပါသည်".
ဤနောက်ဆုံးသတင်း၏အဓိကအရေးကြီးဆုံးအချက်အနေဖြင့်ယခုအခါဌာနခွဲသစ်ဟုခေါ်တွင်သည် AHS အရာသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင်ထားသောစာပိုဒ်တိုများ၏အတိုကောက်မှလာသည် "အဆင့်မြင့် Hardware ပံ့ပိုးမှု" အရာကဲ့သို့စပိန်သို့ဘာသာပြန်ပေးသည် «အဆင့်မြင့် Hardware ပံ့ပိုးမှု»။ အတူတူ, သာအဘို့ဖြစ်၏ 64-bit, နှင့်အခြားအမှုအရာတို့တွင်တစ် ဦး မှမွမ်းမံ၏ဖြစ်နိုင်ခြေပါဝင်သည် Debian 5.4 kernel၊ စားပွဲတင် ၁၉.၂ ဂရပ်ဖစ်စာကြည့်တိုက်အဖြစ်သူ့အဘို့နောက်ဆုံးပေါ် ဆာဗာ X.
ဒီ update ကမူလ repository ကိုပြန်လည်ပြုပြင်သည် MX-Linux (/etc/apt/sources.list.d/mx.list) အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
အသုံးပြုသူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချန်ထားပြီး၊ ဖွင့်ပါ AHS သိုလှောင်ရုံ နှင့်နောက်ဆုံးသတင်းများမှတဆင့်သို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်မှတဆင့် updates များကိုအကောင်အထည်ဖော်။ ဒီ post ထုတ်ဝေမှုကနေတစ်နေ့မှာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်အောက်ပါ package များကို install လုပ်ပြီး update လုပ်နိုင်ပါတယ် MX Linux ကို 19 အသုံးပြုခံ့:
ဤနှင့်အခြားလာမည့်သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်သတင်းကိုတိုးချဲ့နိုင်ပါတယ် Distro MX Linux ဘလော့ဂ်.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အဆိုပါ Distro ကနေနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအကြောင်း «MX Linux» ၏လစဉ်အတွင်း «Febrero de 2020»တစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » MX Linux - ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလအတွက်နောက်ဆုံးသတင်းများ
Google သည် Preview ဗားရှင်းကို Android 11 ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး၎င်းမှာ၎င်း၏သတင်းများဖြစ်သည်
RawTherapee 5.8 သည် RA3 ကို CRXNUMX format နှင့်အခြားအထောက်အပံ့များဖြင့်ရောက်ရှိသည်